बढ्दै छ बेलायतमा मङ्कीपक्सका बिरामीको सङ्ख्या, कस्ता व्यक्तिमा देखिँदै छ बढी सङ्क्रमण? - Laltin Media
Home»अन्तर्राष्ट्रिय»बढ्दै छ बेलायतमा मङ्कीपक्सका बिरामीको सङ्ख्या, कस्ता व्यक्तिमा देखिँदै छ बढी सङ्क्रमण?
बढ्दै छ बेलायतमा मङ्कीपक्सका बिरामीको सङ्ख्या, कस्ता व्यक्तिमा देखिँदै छ बढी सङ्क्रमण?
पछिल्लो आधिकारिक तथ्याङ्क अनुसार बेलायतमा बुधबारसम्ममा मङ्कीपक्सका बिरामीको सङ्ख्या ५०० नाघेको छ।
“नजिकको सम्पर्क र यौनसम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरूमा सङ्क्रमण बढ्दो पाइएको छ । समलिङ्गी, उभयलिङ्गी वा अन्य प्रकारले यौन सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरूमा यस्तो सङ्क्रमण देखिएको युके हेल्थ सेक्युरिटी एजेन्सीले जनाएको छ।
“यद्यपि समग्र जोखिम सानो देखिन्छ, सबैजना सतर्क रहनु पर्छ किनकि सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेन्सीहरूले यस प्रकोपलाई नियन्त्रण गर्न काम गरिरहेका छन् । सङ्क्रमण भएको कसैको नजिकको सम्पर्कमा पर्दा जो कोहीलाई पनि असर गर्ने सम्भावना हुन्छ,” हेम्यानले भने।